Iindaba -Ukunyuka okukhawulezileyo kwophahla wePVC okanye kuyakutshintsha ipatheni esele ikhona kwishishini lokuthambisa?
I-PVC isetyenziswa ngokubanzi kumashishini amaninzi asezantsi, amelwe yimibhobho kunye neeprofayili. Ngokwezibalo zolwazi lweLongzhong, ekusetyenzisweni kwePVC ngo-2018, inani lemibhobho kunye neeprofayili yayiyi-27% kunye ne-24% ngokwahlukeneyo. Kwiminyaka yakutshanje, kodwa kukho ishishini kumashishini amaninzi asezantsi e-PVC, eyimveliso ye-PVC yomgangatho. Umyinge wemfuno ye-PVC iyonke inyuke ukusuka kwi-3% ngo-2014 ukuya kwi-7% ngo-2020.
Okwangoku, ukusetyenziswa konyaka kwe-PVC kumgangatho ongaphezulu kwezigidi ezingama-300 m2, eqhuba uphuhliso olukhawulezayo lweshishini le-PVC lasekhaya, kwaye lenza iziseko ezine zeshishini eBeijing, eZhangjiagang, eShanghai naseGuangzhou. Phakathi kwabo, iBeijing ikakhulu ingenisa iimveliso zekhoyili, i-Zhangjiagang yeyona ndawo inkulu ye-PVC kunye ne-WPC e-China, ngelixa iBeijing kunye ne-Shanghai zigxile kumashishini angaphandle nakwamanye amazwe e-PVC ekhaya nakumazwe aphesheya, kunye nemveliso iyonke yezi zinto zine Imimandla ibala ngaphezulu kwe-90% yemveliso yasekhaya.
Isabelo sentengiso yasekhaya sisezantsi, kwaye kulindeleke ukuba sithathe indawo yomgangatho we-laminate kunye ne-composite kwixesha elizayo
Okwangoku, ngenxa yempembelelo yokwamkelwa koluntu okuphantsi, i-PVC flooring isetyenziswa ikakhulu ezikolweni, ezibhedlele, kwizikhululo zebhasi nakwezinye iindawo zikawonke-wonke, kwaye ukusetyenziswa kwendawo yokuhlala kuncinci.
Xa kuthelekiswa namazwe aphuhlileyo, isikali sentengiso se-PVC flooring e-China sikwinqanaba eliphantsi. Kwi-2017, imfuno yase-China ye-PVC flooring yaba yi-4.06% kuphela, kwaye kusekho indawo eninzi yokukhula. Umgangatho we-PVC wase-China usetyenziselwa ukuhombisa kuluntu, ngelixa i-50% e-United States isetyenziselwa ukuhombisa ekhaya. Ngokukhula kwengeniso yesizwe, ukusetyenziswa komgangatho wePVC kuya kuba kubanzi kwixesha elizayo. Kulindelwe ukuba ukutyibilika kwePVC kuthathe indawo yomgangatho weplastikhi kunye nomgangatho odityanisiweyo kakhulu kwiminyaka emi-5 ukuya kweli-10 ezayo, kungoko kunyusa isabelo sentengiso malunga ne-8% ukuya kwi-9%.
Ukuthumela kwelinye ilizwe kumgangatho wePVC kukhula ngokukhawuleza
Ukusuka kwi-1.39 yezigidi zeetoni kwi-2014 ukuya kwi-3.54 yezigidi zeetoni ngo-2018, umthamo wokuthumela ngaphandle we-PVC e-China unyuke amaxesha e-1.5 kule minyaka mihlanu idlulileyo, ngomndilili wokukhula ngonyaka we-27%. Izinga lokukhula kwamazwe angaphandle kwamanye amazwe lenyukile ukusuka kwi-US $ 1.972 yezigidigidi ukuya kwi-US $ 1.957 yezigidigidi ngo-2014. Kwixesha elizayo, ngenkqubela phambili kunye nobuchwephesha kwezobuchwephesha kunye nemveliso yetekhnoloji yamashishini eTV yaseTshayina, ibango lase China lePVC lokuthumela ngaphandle liya kukhuthazwa.
Umgangatho, PVC Ikhaphethi, Umgangatho wesiponji, PVC Sponge nokwadala, Ukuziva ukuxhasa isilwanyana kwiPet, Umgangatho wekhaphethi,